China YIHOO DB (lyu) izincedisi amagwebu ukwenziwa kunye nefektri | Yihoo
I-polyurethane foam isetyenziswa ikakhulu kwifenitshala, izinto zokulala kunye neemveliso zekhaya, ezinje ngeesofa kunye nezihlalo, iibhedi zangasemva, oomatrasi kunye nemiqamelo.
Kwimveliso yokwenene kunye nokusetyenziswa, ezi mveliso zihlala kufuneka zenze iimfuno eziphezulu zokumelana ne-yellowing kunye ne-flame retardant. Inkampani ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokongeza kunokunceda ukuphucula ukusebenza kwemveliso.
Inkampani inokubonelela ngezongezo ezingezantsi ze-PU:
UV ABSORBER YIHOO UV1 Ukusetyenziswa ngokubanzi kwi-PU, i-adhesive, i-foam kunye nezinye izinto.
YIHOO UV571 TINUVIN 571 Isetyenziswa ngokubanzi kwi-thermoplastic PUR yokugquma kunye neeplastikhi ezihlanganisiweyo ze-foam, i-polychloride eneplastikhi enzima, i-PVB, i-PMMA, i-PVDC, i-EVOH, i-EVA, ubushushu obuphezulu obuphilisa ipholiyesta engafakwanga i-PA, i-PET, iPUR kunye ne-PP ifayibha ejikeleza uGawulayo.
YIHOO UV B75 TINUVIN B75 Ikhompawundi yokufunxa i-UV, isetyenziswa ikakhulu kwi-PU, ukunamathela okanye ukutyabeka kwe-PUR, njenge-tarpaulin, ilaphu lesiseko kunye nofele lwento.
ISIQINISEKISO YIHOO AN333 JP333E I-Phenol-free antioxidant, esetyenziswa njengesiqinisi sokufudumeza sobushushu kwi-PVC, ukuphucula umbala kunye nokwenza izinto elubala kweemveliso zePVC. Ingasetyenziselwa kwirabha nakwizinto ze-PU ukuphucula ukumelana nokuguga kweemveliso.
YIHOO AN340 I-Phenol simahla i-antioxidant, inokusetyenziswa ngokubanzi kwi-PVC, ABS, SBR, CR njl.
ILANGAMANI LIYABUYEKA YIHOO FR950 / Chlorine phosphate ester nelangatye nekudodobalisa, ingakumbi efanelekileyo nelangatye nekudodobalisa DB amagwebu.
Inokukunceda ukupasa umgangatho we-California 117, i-FMVSS302 esemgangathweni yesiponji semoto, iBritish standard 5852 Crib 5 kunye neminye imigangatho yovavanyo lwedangatye. I-FR950 yeyona ilangatye ilibazisayo ifanelekileyo endaweni ye-TDCPP (carcinogenicity) kunye ne-V-6 (equlathe i-carcinogen TCEP).
Egqithileyo I-YIHOO PA (i-polyamide) yokulungisa kunye nezongezo zohlengahlengiso
Okulandelayo: I-YIHOO PVC (i-polyvinyl chloride) kunye nokuphuculwa kwezongezo
Imoto Flame nekudodobalisa
Lyu Flame nekudodobalisa
Lyu UV Absorber
Pu amagwebu Antioxidant
Flame Flame nekudodobalisa
I-YIHOO PVC (i-polyvinyl chloride) yokunyibilikisa ...